Xorriyadda ama Duufaanka: Dr. Xaakim al-Mudayri | isbeddel
← Tunisia’s popular uprising: the doomsday life presidents as a window of hope
Islam and demography: A waxing crescent →
Xorriyadda ama Duufaanka: Dr. Xaakim al-Mudayri
Sannadkii 2008-dii waxa daabacaaddiisii labaad soo baxday buug dood badan ka dhaliyey guud ahaan dunida carabta gaar ahaanna Khaliijkooda. 334-ka bog ee dhiganuhu ka kooban yahay waxa uu Dr. Xaakim al-Mudayri uga jeeday asalayn iyo dib u hayaamid ku dhisan daraasad iyo tixraac taariikheed.
Sideedaba “xorriyad” waa ereyga ugu macaan ee dhegaha qof kasta oo carab ahi wakhtigan maqli karaan. Saddex iyo toddobaatan markay ahayd taariikhda islaamku, ayay carab iyo xorriyadi kala dhaqaaqeen. Sidaas ayaa aad loogu hadal hayaa sannadahaa qarniga ka yar ee wax kasta oo wanaagsani cirka isu shareeray. Labada tiir ee cadaaladda iyo xorriyadda ayaa qaangaadhay oo si fiican u bislaaday. Barwaaqaa jasiiradda carabta ka dhacday oo xitaa yeyga ayaa xoolaha la saaxiibay. Waabu daajiyey. Wiil gaal ah oo lagu dhirbaaxay Masar dhexdeeda ayaa kii dhirbaaxay iyo aabbihiiba Madiina looga yeedhay oo indhaha lagaga dhacay loogana gooyay dhirbaaxadii. Intaa laguma dayn ee waxa laga yidhi “Goormaad dadka gumaysateen iyaga oo hooyooyinkood xornimo ku dhaleen?”. Qof kasta diintiisa ayaa loo nabad geliyey, “Diinta la isuma khasbi karo…” ayaa meesha taallay. Iyada oo sidaas ah ayuunbaa mar keliya dhulka laga soo go’ay. Xoolaha iska daaye, dadkiibaa badbaadi waayey. Dhirbaaxo la kala goosto iska dhaafe Kacbadaa denbi la’aan la isu deldelay.
Mar kasta oo saddex iyo toddobaatankaa sano laga soo durkayba belaayada ayaa sii badatay, dhiig badan ayaa sii daatay, iscabbudhin badan ayaa hirgashay, waa la isnacay, waa la kala aammin baxay, meel laga bilaabo iyo si loo soo celiyo ayaa ilaa maanta lagu dhakofaaray. Wareerkaas ayuu buugga Xorriyadda ama Duufaanku isu dayayaa in uu lafaguro.
Hordhac dheer dabadeed, qoraagu waxa uu sharxay qaabka nidaamka dawladda ee islaamka. Waxa uu u qaybiyey saddex marxaladood. Ta koowaad oo ahayd tii Khulafada waxa uu sheegay in ay ku salaysnayd mabaadi’dan:
– Diin ma jirto dawlad la’aan,
-Dawladi ma jirto madaxweyne la’aan,
-Madaxweyne ma jiro doorasho la’aan,
-Doorasho ma jirto kalsoonida ummadda la’aanteed,
-Kalsooni ummadeed ma jirto wada tashi la’aan,
-Wada tashina ma jiro xorriyad la’aan. Intaa dabadeed waxa imanaya in la isla garto:
-Sharciyadda iyo go’aanka u sarreeya waxa leh Ilaahay,
-Ku nuuxnuuxsashada labada mabda’ ee Caddaaladda iyo Sinnaanta,
-Ilaalinta xorriyadaha kooxeed iyo keli ahaaneed ba.
Intaa dabadeed waxa uu gelayaa labadii marxaladood ee ku xigay qaab dhismeedkaa dawladnimo ee Nebiga iyo Khulafadu ku soo hageen ummadda iyo marxalad walba tafaasiisheedii. Iyo intaa ka dib, dhiraandhirin ku saabsan halka ay wax ka qalloocsameen iyo far ku fiiqidda godka biyuhu ka soo galeen.
Gaar ahaan xilligan carabtii isu dhalaashay (Tuunis, Masar, Yaman, Soodaan, Ciraaq, al-Jeeriya iqk), buuggani waxa uu si nasteex ah u qodqodayaa nabarrada keenay kaarkan maanta lala jibaadayo iyo daawada ugu sahlan ee lagu dhayi karo. Sidaa darteed ayaa doqommadii cumaamadaha weynaa ee Khaliijka hor kuudaday qaarkood u diideen inuu dalalkooda soo galo buuggani. Mid se ay illoobayn ama is illowsiiyeen ayaa ahayd Tiknoolajiyadda. Malaayiin koobbi oo buuggan ah ayaa lagala dagey Internet-ka. Maantana kii diiday ayaa ugu futo-xun. Haddii aad akhrido buuggan waxa aad arki doontaa sida qoraagiisu ugu habboon yahay arrintan uu qallinka u qaatay. Aqoon ahaan, labada shahaado ee BA iyo MA waxa uu ku qaatay Fiqiga, ta saddexaad ee PhD-dana Philosophy. Iyadoo sidaas ah haddana kollay bani-aadanku marnaba dhammays ma noqon karo.
Buuggan waxa ku jira meelo badan oo si aan bislayn u yaalla…Tusaale ahaan marka uu ka sheekaynayo nidaamka maamul ee reer galbeedka waxa uu uga hadlayaa si uu aad ula dhacsan yahay isagoon isu miisaamin qolofta sare ee ay dunida tusaan iyo xaqiiqo ahaan waxa gunta ku libidhsan ee ay yihiin. Waxa kale oo aanu kala saarayn labada dhaqan siyaasadeed ee galbeedka gaalka ah iyo bariga islaamka ah; oo waxa uu ku doodayaa in qoladii Cismaan bin-Cafaan dishay ay ahaayeen mucaarado sharci ah oo xaq u lahayd sidaas. Halkaas ayaa lagala soo bixi karaa qanacsanaanta xad dhaafka ah ee uu u hayo habka xisbiyada badan ee reer galbeedku u hagaan siyaasaddooda. Meelahan ayaana rag badan oo islaamiyiin ah oo buuggan falanqeeyey ka abbaareen naqdintiisa, waana runtood.
Buuggani waxa uu u baahan yahay falanqayn aad u qoto dheer oo haddii cid afsoomaali ku qorta aan heli lahayn si aad ah ugu badhaadhi lahayn. Laakiin qushiye, wadaagguba malaha ma xumee, haddaad wakhti u hesho halkan kala deg isaga oo dhan: http://vb.altareekh.com/t43955/